Carl Henry Real Estate Blog
Ny Fampandrosoana Loosement UK dia fanangonam-bola goavana
Ny governemanta Britanika dia tena mifantoka amin'ny fanentanana ny fampandrosoana ny trano fonenana hamaha ny fatiantoka goavana amin'ny tanjona isan-taona, dia nanambara ny fividianana £ 7 Billion ho an'ny orinasa madinika sy maoderina. Fotoana iray isaky ny androm-piainana ho an'ny orinasa tompon'ny orinasa sy ny mpampiasa vola avy amin'ny JV.
Nahoana no misy ny fiverenan'ny 100,000 fohy amin'ny fampandrosoana trano?
Tsy ampy fahaizana
Nandritra ny taona maro dia nihena ny isan'ireo olona miditra amin'ny indostrian'ny fanorenana, indrindra fa ny fianarana, ka tsy misy ny fahaiza-manao ilaina eo an-toerana.
Tsy fahampian'ny fitaovana
Ny 'biriky' manetry tena dia fandefasana fohy, ny fitaovan'ny trano fanorenana, ary tsy dia tsara loatra ny fitaovana tsara indrindra!
Tanam-barotra amin'ny trano lehibe kokoa
Ny fialantsasatra be dia be dia be dia be ary ny fandinihan'ny Federasion'ny trano fonenana dia manandrana manaporofo fa tsy zava-misy izany, fa mbola mitoetra ho ny zava-misy fa ny tranobe lehibe indrindra dia manana tany tsy misy fiafarana. Ny fitantanana dia manana adidy hahazoana tombony lehibe indrindra avy amin'ny tahirin-tany izay mametra ny safidiny.
Faharetan'ny fangatahana fahazoan-dalana
Milaza ireo mpanao trano lehibe fa izany no antony tsy ahafahany mampivelatra ny ankamaroan'ny tany itazonana azy, fa ny olana dia miankina amin'ny zava-misy fa ny fivoarana dia tena goavana sy sarotra manova ny ara-dalàna manerana ny tontolo iainana sy ny toekarena eo an-toerana.
Manana ny valiny izahay!